Ɔweɔn-Aban​—Dza Adzesua Nsɛm Wɔ Mu, May 2020
Adzesua nsɛm a yebosũa July 6–August 2, 2020.
Adzesua asɛm 19: July 6-12, 2020. Yehu adanse a ɔkyerɛ dɛ Daniel no nkɔnhyɛ a ɔfa “kwaamu [anaa etsifi] afamu hen” nye “pomu [anaa anaafo] afamu hen” no ho no gu do ara rinya mbamu. Ebɛnadze ntsi na yetum dze ahotodo kã dɛm? Ebɛnadze ntsi na ohia dɛ yɛtse nkɔnhyɛ yi no mu nsɛm ase yie?
Nkɔnhyɛ mu nsɛm a ɔfa ‘etsifi afamu hen no’ nye ‘anaafo afamu hen no’ ho nye nkɔnhyɛ mu nsɛm afofor sisii wɔ ber kor mu. Ebɛn kwan do na dɛm nkɔnhyɛ ahorow no ma yehu dɛ wiadze nhyehyɛɛ yi bɛba ewiei ndaansa yi ara?
Adzesua asɛm 20: July 13-19, 2020. Ndɛ, woana nye ‘etsifi afamu hen no,’ na ebɛn kwan do na wɔbɛsɛɛ no? Sɛ yenya nsɛmbisa yi ho mbuae a, obotum ahyɛ hɛn gyedzi dzen, na aaboa hɛn ma yeesiesie hɛnho ama nsɔhwɛ a ɔda hɛn enyim wɔ daakye a onnyi ekyir no.
Adzesua asɛm 21: July 20-26, 2020. Adzesua asɛm yi bɛma yenya enyisɔ kɛse ama Jehovah nye akyɛdze ahorow bi a ɔdze ama hɛn. Ɔbɛsan aboa hɛn ma yɛnye hɔn a wɔnngye Nyankopɔn nndzi no eesusu nsɛm ho.
Adzesua asɛm 22: July 27–August 2, 2020. Adzesua a odzi iyi enyim no, yesusuu akyɛdze ahorow a Nyankopɔn dze ama hɛn a yɛdze hɛn enyi hu no ho. Adzesua yi mu no, yebosusu akyɛdze fofor bi ho; ɔyɛ akoradze ahorow bi a yɛmmfa hɛn enyi nnhu. Afei yebosusu mbrɛ yebesi akyerɛ dɛm akoradze ahorow yi ho enyisɔ. Bio so, adzesua yi bɔboa hɛn ma enyisɔ a yɛwɔ ma Jehovah Nyankopɔn a ɔyɛ dɛm akoradze yi Farbaa no aayɛ kɛse.